शिक्षा विधेयक एक पटककालागि राष्टपतिले फिर्ता गर्न सक्ने | EduKhabar
Nidhiratna Bastola :
शिक्षक व्यबस्थापनको निकासका लागि भन्दै एकपटकका लागि भनेर २०६१ मा ५०५र ५०५र देशभर रिक्त पदको ५०५ मा आन्तरिक भन्दै तिनै अस्थायी शिक्षक स्थाइ भए। तर खुला विज्ञापन हुन दिइएन। फेरि द्दण्टढ मा विज्ञापन हुँदा कित्ताकाट गरेर पुराना अस्थायिले आफ्ना पद विज्ञापनबाट सुरक्षित गरे २०६३ पछिकाको सिटमा उनिहरू आयोग लडे। एकजनाले दुइपदको सुबिधा लिगे। अरू २०६३ पछिकालाइ विस्थापित गरे। किन पक्षपातरु भनी प्रश्न गर्दा अस्थाइ समस्याको पिलो हटाएका हौ ।
२०६३ पछिका १२ र १५ हजार अस्थाइ शिक्षकलाइ मर्का परेपनि विधि बसाल्न यसो गरेका हौं। भनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू जबाफ दिन्थे। आफ्ना बाहेकका विस्थापित गरेपछि अहिले आफ्ना मान्छे हरू सवैजसो स्थाइ गर्न फेरि पिलो हटाको भन्दैछन्। कुन मुखले बोल्छन्। अहिले ७५५ आन्तरिक भनेर प्रचार गर्दैछन्। २५००० पद मध्ये १५ हजार सतप्रतिसत र १० हजारको ७५५ गर्दा कुल रिक्त पदको ९०५ हुन्छ। आन्दोलनकारिसंग भएको सहमती पनि यो हैन। खास समुहका लागि भनेर मात्र शिक्षक छनौट परीक्षाको प्रश्नपतको नमुना र पा्ठ्यबस्तु किन सरल र खुकुलो बनाएकोरु पास अंक पुर्याउनेलाइ स्थाइ गर्ने हो स्वतस् हैन पनि भन्ने। अनि पाठ्यवस्तु घटाउने, सरल पार्ने, प्रश्नको नमुना पनि सरल पार्ने। १० वटामा कुनै ६ वटा गर्नु पर्ने रेरु यो कस्तो नौटंकी। अब शिक्षक त कसै नेताका आफ्ना मान्छे होलान् स्कुलमा विद्यार्थी त किन पो जानू पर्यो र? ७ देखि १० लाख हातमा आएको रकम भो भनेर स्थाइ शिक्षकको जागिर साटेको देख्नु पर्यो यो देशमा। माफियाको जालो भनेको यै त होलानि । पिलो हटाको भनेर १८ हजार विस्थापित गरिसकेपछि अहिले फेरि यो के पारा निकालेको। सरकारि तलव भत्ता, रासन पानी खानेलाइ पनि निजी स्कुलकै मात्र चिन्ता देदेखियो।
गरिबका बच्चा पढ्ने स्कुलको के मतलब रहेछ र । २०७०, ७२, ७३ मा धरै शिक्षक विस्थापित भए । उनिहरूले पनि सात र आठ वर्ष सरकारि दर्बन्दिमा अस्थायि सेवा गरेका थिए। अझ निजिस्रोत, र राहत दर्वन्दिमा दशकौं काम गरेकाको मनोदशा के होला ? याग्यता र लाइसेन्स बनाएर वसेका सातलाख युवाले के भन्ने? आफुलाइ मात्र विस्थापनमा पारेकाले के भन्ने? शिक्षकलाइ यो स्तरमा पुर्याएपछि शिक्षकले कुन जाँगरले काम गर्ने? ८र १० लाख संग साटेको जागिमा गएर अब स्थाइ भइ आउनेले कुन मनले काम गर्नेरु सार्बजनिक शिक्षा आरालोे लागेकोमा कोकोहोलो गर्दै शिक्षकलाई दोश थोपर्नेले अब कुन मुखले आरोप शिक्षकतिर लगाउने ?
साठिलाख गरिव विद्यार्थीका अभिभावकले अब कहाँ लगेर धनिले जसरी आफ्ना बच्चालाइ शिक्षा दिएर धनिका बच्चा सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउने?
प्रकाशित मिति २०७४ आश्विन १६ ,सोमबार